MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: 2013-01-27
ဗမာစစ်တပ်မှ ဒေါ်နာ့ဖော့ခါန်တောင်အား မဒိမ်းကျင့် သတ်ဖြတ်
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနား - ဗန်းမော် ကားလမ်း ဒဘတ်ကျေးရွာ နှင့် အင်ခရာမ်းကျေးရွာကြားတွင် ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ဗမာအစိုးရ တနိုင်း ခြေစိုက် စစ်တပ်များမှ ကလေးသည် မိခင် ဒေါ်နာ့ဖော့ခေါန်တောင် အား လူမဆန်စွာ မဒိမ်းကျင့် သတ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်များသည် ရောက်ရာဒေသများ၌ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူများ အား ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်၊ အမျိုးသမီးများအား မဒိမ်းကျင့်သတ်ဖြတ်၊ ကချင် ရွာများကို မီးရှို့ဖက်ဆီးမှုများ အချိန်တိုင်း လုပ်ဆောင်နေလျက် ရှိကြောင်း လည်း သိရှိရပါသည်။
at 2/02/2013 06:51:00 PM No comments:
ဖားကန့်သို့ ဒုက္ခသည်များကို ကူညီရန်လာသော KBC ဓမ္မဆရာများကို အစိုးရဂိတ်မှ တားဆီးလိုက်
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ် ဆိုင်းရာကျေးရွာ (Seng Ra) ဒေသခံ များ ကို ကူညီထောက်ပံ့မှုပေးရန် မြစ်ကြီးနားမြို့မှ ရောက်ရှိလာသော ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (KBC) ဓမ္မဆရာများကို ဖားကန့် ဆန်ခါ (Sang Hka) အစိုးရဂိတ်မှ တားဆီးလိုက်သည်။
KBC မှ တာဝန်ရှိသူ ဆရာများ ၁၂ ဦးသည် ဆိုင်းရာ (Seng Ra) ကျေးရွာ ရှိ ဒေသခံများ၏ အကူအညီပေးရန်ခေါ်ဖိတ်ခြင်းအရ ထွက်ခွာလာချိန် ဆန်ခါကျေးရွာရှိ အစိုးရဂိတ်မှ ဖြတ်သန်းခွင့်မပြုပဲ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁ ရက် ယနေ့တွင် မြစ်ကြီးနားသို့ ပြန်လှည့်ပြန်သွားခဲ့ရကြောင်း ကချင်နှစ်ခြင်း ခရစ် ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (KBC) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး သိက္ခာတော်ရ Rev. Dr. Hkalam Sam Sun ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ကို KBC ဆရာတွေဖြစ်လို့ မသွားခိုင်းတာနေမှာပေါ့။ အခုအဲဒီ ဆိုင်းရာ (Seng Ra) က လူတွေက ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ဖို့ခက်နေ တယ် တဲ့။ အစိုးရတွေ မထွက်ခိုင်းဘူးတဲ့။ အဲဒီမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်လာရင် သူတို့
at 2/02/2013 06:30:00 PM No comments:
တိုင်းရင်းသားများအတွက် စိုးရိမ်စရာ Classical Democracy
အကောင်းမြင်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ထက်စာရင်တော့ လုံးဝ မပြောင်းလဲ ဘူးလို့ ပြောလို့တော့ မရတာ အမှန်ပါ။ သို့သော် ဗမာ လူထု နဲ့ NLD လို Classical Democracy လမ်းကြောင်းဖက် သွားနေသူများ အတွက် မျော်လင့်စရာ ရှိကောင်း ရှိပါမယ်။ ဒါပေမယ့် တိုင်းရင်းသားများ လိုလားတောင့်တ နေတဲ့ နိုင်ငံရေး အာဏာခွဲဝေခြင်း နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဖက်ဒ ရယ် ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကိုတော့ ဗမာ နိုင်ငံရေး သမားများ အနေနဲ့ လက် နက်မဲ့ တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေး သမားများတောင်းဆိုသံကို စိုးစဉ်းမျှ စဉ်းစားပြီး လိုက်လျှောမှာ မဟုတ်ပါ။ Classical Democracy ဆိုတာ အရပ်စကားနဲ့ ပြောရရင် ရေများရေနိုင်၊ မီးများမီးနိုင် ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို ပြောတာပါ။
NLD ရဲ့ မူဝါဒ ဖြစ်တဲ့ Classical Democracy အတွက်တော့ ဖြစ်လာနိုင် စရာ ရှိပါတယ်။ သို့သော် Classical Democracy ဟာ လူနည်းစု တိုင်း ရင်း သားများအတွက် လက်တွေ့ အာမခံချက် မရှိပါဘူး။ ဘာလို့လဲ ဆို တော့ အဲဒီစနစ်ဟာ လူများစု အတွက်ပဲ အလုပ်လုပ်တဲ့ စနစ်ဖြစ်လို့ပါ။ နောက်ဆုံးတော့ တိုင်းရင်းသား ပြည်နယ်များ ဆက်လက် ရပ်တည်နိုင်ဖို့ တောင် မလွယ်ပါ။ လွတ်တော်မှာ ဗမာကိုယ်စားလှယ် လူများစုက လွမ်း မိုးပြီး တိုင်းရင်းသားများရဲ့ အခွင့်အရေးများ လုံးဝ ပျောက်ကွယ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
at 2/01/2013 08:56:00 PM No comments:
အစိုးရစစ်တပ်က ဖားကန့်မြို့နယ်ရှိ ချင်းရွာ အား လက်နက်ကြီးဖြင့် ပစ်ခတ် (၄) ဦးသေ
Posted by khonumthungPosted on Friday, February 1st, 2013
ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ဗုဒ္ဒဟူးနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီခန့် က နောင်ချိုအခြေစိုက် အစိုးရစစ်တပ် အင်အား ၅၀၀ ခန့်သည် ချင်းလူမျိုး များနေထိုင်သည့် ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ် ဝှေခါ အုပ် စု၊ မှော်ဖီ ရွာအား လက်နက်ကြီးများဖြင့် ဆက်တိုက် ပစ် ခတ် သဖြင့် ရွာသား (၄) ဦးသေဆုံးပြီး အိမ်ငါးလုံး လက်နက်ကျည်ဆံထိ မီးလောင်သွားသည်ဟု သိရသည်။
နောင်ချို တပ်သည် မိုးကောင်းဖက်မှ တက်လာ ကြပြီး တာမခန်အခြေစိုက် စစ်တပ်နှင့် ပူးပေါင်း စစ်ဆင်နေကြခြင်းဖြစ် ကြောင်း ရွာသားများသည် ဗုံးခိုကျင်းများ၊ ကျောက်ကျင်း မြေစာပုံများကို အကာ အကွယ်ယူ ပုန်းအောင်းနေ ရကြောင်း ဒေ သခံ ချင်းလူမျိုးတဦးက ပြောသည်။
at 2/01/2013 08:37:00 PM No comments:
စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် စားပွဲပိုင်းမှာလာဆွေးနွေးဖို့ သမ္မတတိုက်တွန်း
စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ဖို့ စားပွဲဝိုင်းမှာ အားလုံး ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းအဖြေရှာရမယ့် အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်လို့ သက်ဆိုင်တဲ့ခေါင်း ဆောင်တွေအားလုံး စားပွဲဝိုင်းကိုလာပြီး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြဖို့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က တိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာမူဝါဒတွေ၊ လုပ်ဆောင် ချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာ့အသံ၊ ပိတောက်မြေရေဒီယိုတွေနဲ့ FM ရေဒီယိုတွေကနေ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက် ကစပြီး တရက် ၄ ကြိမ်ထုတ် လွှင့်နေတဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ပထမဆုံး ရေဒီယိုမိန့်ခွန်းမှာပြောကြား လိုက်တာပါ။
at 2/01/2013 08:35:00 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတာ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်နေပြီဖြစ် ပေမယ့် စစ်မြေပြင်အခြေနေကို လွတ်လပ်စွာသတင်းပို့ခွင့်ရတာကတော့ ရက် ၆၀ မပြည့်သေးဘူးလို့ ပြောရမှာပါ။ အထူးသဖြင့် အခုဖြစ်နေတဲ့ ကချင်စစ်ပွဲဟာ အစိုးရသစ်၊
လွှတ်တော်သစ်လက်ထက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ရေးကာလ၊ အတိအကျ ပြောရမယ်ဆိုရင် ပြန်ကြားဝန်ကြီးအသစ်နဲ့ ဒုဝန်ကြီးအသစ်လက်ထက် မီဒီယာအသွင်ကူးပြောင်းရေး ကာလလို့ ကြွေးကြော်နေချိန်မှာ ပထမဆုံးကြုံလိုက်ရတဲ့ မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့် စမ်းသပ်မှု တခုဖြစ်ပါ တယ်။
ဖဆပလ ခေတ်နဲ့ မဆလ ခေတ်အစောပိုင်းတွေမှာ သတင်းစာဆရာတွေ ကိုဖိတ်ပြီး စစ်မြေပြင်ကို ပြသတာတွေ ရှိခဲ့ဖူးတယ်လို့ သိရပေမယ့် သူ ပုန်တွေဘက်အထိသွားပြီး သူပုန်တပ်တွေနဲ့အတူ ပြည်တွင်းသတင်း ထောက်တွေ ကိုယ်တိုင် သတင်းသွားယူတာကတော့ အခု ကချင်စစ်ပွဲ ဟာ ပထမဆုံးလို့ ကျနော်ထင် ပါတယ်။
at 2/01/2013 08:34:00 PM No comments:
at 2/01/2013 05:50:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း တိုက်ခိုက်နေကြသည့် စစ်ပွဲများနှင့် ပတ်သက်၍ အစိုးရနှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO) တို့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် စားပွဲဝိုင်းပေါ်တွင် ဆွေးနွေးရန် နီးစပ်လာပြီဖြစ်ကြောင်း နှစ်ဖက် သဘော ထားများအရ သိရှိရသည်။
KIO က ယနေ့ နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သော သဘောထားထုတ်ပြန် ချက် ၇ ချက်ထဲတွင် “KIO သည် နိုင်ငံရေး ပြဿနာများကို ဆွေးနွေး ခြင်းဖြင့်သာ အဖြေရှာနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း အစဉ်ပြောဆိုခဲ့သည့် အတိုင်း လိုအပ်သော ဆွေးနွေးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည်” ဟု ပါရှိသည်။
KIO အနေဖြင့် စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အကူအညီပေးနိုင်မည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံများအား ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ရန်
at 2/01/2013 05:31:00 PM No comments:
at 2/01/2013 11:36:00 AM No comments:
at 2/01/2013 11:30:00 AM2comments:
at 2/01/2013 11:21:00 AM No comments:
အရည်အချင်းရှိတဲ့ ပြည်သူ့ကိုယ်စား လှယ်တွေ များများ ပေါ်ထွက်ပါစေ
မနေ့က ဘီဘီစီ ညနေပိုင်း စကား ဆွေးနွေးဝိုင်းကို နားထောင်ပြီး စိတ်ထဲ "ကျလိ ကျလိ" ဖြစ်လာလို့။ "စစ်ပွဲကိစ္စ အပြုတ်တိုက်မယ် ဆိုတာကို လွှတ်တော်မှာ အဆိုသွင်းသူရှိလာတယ်။ ဒါကို ... ဘယ်လို ထင်ပါသလဲ" ဆိုတဲ့ စကားဝိုင်းပါ။
(ဝင်ပြောဖို့ စဉ်းစားပေမယ့် အခုအချိန်က နိုင်ငံရေးကိစ္စမှာ ပြောရဲ ဆိုရဲသူတွေ များလာနေလို့ အခြားသူတွေ ပြောနိုင်ဖို့အတွက် မပြောဖြစ် ခဲ့ပါဘူး။)
ဒီဆွေးနွေးဝိုင်းမှာ ကြံဖွတ်ပါတီက လွှတ်တော် အမတ် ဖြစ်တဲ့ အဆိုတင် သွင်းသူ ဦးမြင့်ဆွေ ဆိုသူက နိုင်ငံရေးကို နားမလည်ဘူးဆိုတာ အင်မ တန် ထင်ရှားတယ်။ ဒီလို နိုင်ငံရေး နားမလည်ဘဲ ပြည်သူ့ကိုယ်စား လှယ်ဆိုပြီး လွှတ်တော်ထဲ ရောက်နေတာ မရှက်ဘူးလားမသိဘူး။
at 2/01/2013 11:07:00 AM No comments:
အရာရာ အားလုံး ဗမာမှု ပြုခြင်း နဲ့အတူ စစ်ရဲ့အနိဌာရုံသည်လဲ ဆက် လိုက် လာမည်သာ ဖြစ်သည်။
ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် အသင်းချုပ်ကြီးရဲ့ အစီရင်ခံစာ အရ၊ ပြီးခဲ့သော တစ်နှစ်ခွဲကြာလ ကြာ စစ်ပွဲအတွင်းတွင် ကချင်ရွာပေါင်း ၂၀၀ ကျော် ဖျက်ဆီးခဲ့သည့်အပြင်၊ ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်း ၆၆ ခုကိုလဲ ဖျက်ဆီး ပေး လိုက်ကြောင်း စာရင်းတင်ပြထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ (အသေး စိတ် သိလိုသူများ နှစ်ခြင်း အသင်းချုပ်ရုံးသို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်သည်။)
at 2/01/2013 10:43:00 AM No comments:
at 2/01/2013 10:42:00 AM No comments:
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်ကျောက်စိမ်းတွင်းဒေသ လုံးခင်းကျေးရွာအုပ်စု လုံးခင်း နဲ့ မှော်စီစာရွာကြားမှာရှိတဲ့ လုံးခင်းဆက်သွယ်ရေး တာဝါတိုင် လုံခြုံရေးရဲကင်း နားမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက် ည ၈ နာရီခန့်က လုံခြုံ ရေး အင်အား ၂၀ လောက်က ဒေသခံပြည်သူ ၄၀ လောက်ကို တာဝန် အရ စစ်ဆေးတယ်ဆိုပြီး သူတို့မှာပါလာတဲ့ ရွှေဆွဲကြိုး၊ လက်စွပ်၊ ဟန်း ဖုန်း ကအစ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို သိမ်းယူသွားခဲ့တယ်လို့ စုံစမ်းသိရှိ ရပါတယ်။
လုံးခင်းကနေ သာယာကုန်း ကျေးရွာဘက်အသွား လုံးခင်းကျေးရွာနဲ့ တစ်မိုင်အကွာ ဂေါက်ကွင်းအနီးမှာ ဒေသခံ ပြည်သူတွေကို အချိန်သုံး နာရီကြာတဲ့အထိ မြေပြင်မှာဝမ်းလျားမှောက် ရိုက်နှက်စစ်ဆေးပြီး ပစ္စည်း တွေ ယူသွားတာလို့ ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဒေသခံတစ်ဦးက RFA ကို ပြောပါတယ်။
at 2/01/2013 10:40:00 AM No comments:
at 1/31/2013 09:13:00 PM No comments:
အပစ်ရပ် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်ထောင်စု အစိုးရတို့အကြား နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှု မစတင်နိုင်ဘဲ နှောင့်နှေးနေရသည်မှာ ကချင်ပြည်နယ် စစ်ပွဲကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP) ကပြောသည်။
“ကချင်ပြည်နယ်တွင် ပြင်းထန်နေသော စစ်ပွဲအခြေအနေကြောင့် ပြည်ထောင်စု အစိုးရနှင့် မိမိတို့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီအကြား သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ထားသည့် ၂၀၁၂ ခု မကုန်မီတွင် စုစည်းနိုင်သမျှသော အပစ်ရပ် အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပြည်ထောင်စု အစိုးရတို့အကြား နိုင်ငံရေးအရ စတင် ဆွေးနွေးရေးသည်လည်း နှောင့်နှေးနောက်ဆုတ်ခဲ့ရသည်” ဟု ဇန်နဝါ ရီလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်သည့် NMSP ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီ သဘောထား ကြေညာချက်တွင် ပါရှိသည်။
at 1/31/2013 09:11:00 PM No comments:
at 1/31/2013 03:14:00 PM No comments:
ယမန်နှစ် ဒီဇင်ဘာလလယ်ပိုင်းမှစ၍ KIO ဋ္ဌာနချုပ်ရှိရာ လိုင်ဇာမြို့ အနီးရှိ စိုးမိုးကုန်းများအား အစိုးရတပ်မှ လေကြောင်းပစ်ကူ အပါအဝင် အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့် စတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရာမှ နှစ်ဘက်တိုက် ပွဲများ အပြင်းအထန် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
at 1/31/2013 11:51:00 AM No comments:
Hka Ya Bum စခန်းအား တပ်မတော်မှ အင်အား ဖြည့်တင်းလျက်ရှိ
တပ်မတော်မှ MA6 ၁၂၀ မမ စိန်ပြောင်းကြီး (ဓာတ်ပုံ - mmmilitary blog)
Hka Ya Bum တောင်ကုန်း စခန်းအား တပ်မတော်မှ သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် လက်နက်ကြီးများဖြင့် အင်အား ဖြည့်တင်းလျက် ရှိကြောင်း KIA နှင့် နီးစပ်သူများထံမှ စည်းလုံးခြင်းရဲ့ အင်အား ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သို့ သတင်းပေးပို့ လာပါတယ်။
at 1/31/2013 11:46:00 AM No comments:
at 1/31/2013 11:46:00 AM2comments:
ကချင်ပြည်နယ်တိုက်ပွဲ အတွင်း အရပ်သားတချို့ ထိခိုက်သေဆုံး
ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးကောင်းမြို့နယ်က မရမ်းကျေးရွာမှာ ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ် KIA နဲ့ အစိုးရတပ်ကြား မကြာသေးခင်က တိုက်ပွဲတွေအတွင်း ဗုံးခိုကျင်းထဲကို လက်နက်ကြီးကျည် ကျတာကြောင့် အရပ်သား ၂ ယောက် သေဆုံးပြီး ၃ ယောက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ အရပ်သားတွေ ထိခိုက်သေဆုံးတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အပေါ်မှာ ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ အစိုးရကြား အပြန်အလှန် အပြစ်ဖို့နေကြတာပါ။ ဒီအကြောင်း အပြည့်အစုံကိုတော့ ဗီအိုအေ မြန်မာပိုင်း သတင်းထောက် ကိုမိုးဇော်က စုံစမ်းတင်ပြထားပါတယ်။
ဒီလိုအရပ်သားတွေ သေဆုံးမှုဟာ အစိုးရရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ KIO/KIA တို့ဟာ ၀ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီရဲ့ ဖိတ်ခေါ်ချက်အရ ပန်ဆန်းမြို့မှာ နှစ်ဘက် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးကြမယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာချိန်မှာပဲ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အရပ်သားတွေ ထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုတော့ ဒေသခံတယောက်က အခုလို ပြောပြပါတယ်။
at 1/31/2013 11:35:00 AM No comments:
ကချင်ဒေသတွင် အဓမ္မုနည်းဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးရယူရန် ကြိုးပမ်းခြင်းကို ရပ်တန့်ရန် ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် KBC တောင်းဆို
ယနေ့ ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ်၏ မြန်မာပြည်တ၀ှမ်း အသင်းတော် ဇုံနယ် ၁၅ ခုမှ ဓမ္မဆရာများ ၁၅၀ ဦးဆောင်၍ မြစ်ကြီးနားမြို့ ဂျော်ဘွမ် (Jaw Bum) ဆုတောင်း တောင်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ၀တ်ပြုဆုတောင်းပွဲအစီစဉ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်အတူ အစိုးရကိုလည်း အချက် (၄) ချက်ဖြင့် တောင်းဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အဖွဲ့ဝင်ဆရာများ ပြောသည်။
at 1/31/2013 11:34:00 AM No comments:
ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနက ဇန်န၀ါရီ ၂၉ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန် ချက် တွင် ပါရှိသော ပြည်တွင်းပြည်ပ မီဒီယာတချို့သည် ကချင်အရေး နှင့် ပတ်သက်၍ ဖော်ပြရာတွင် တဘက်စောင်းနင်း ဖြစ်နေသည်ဆိုသည့် အချက်ကို ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းသမားများက ထိုသို့မဟုတ်ကြောင်း ပြန်လည် တုံ့ပြန်ကြသည်။
လက်ရှိအချိန်အထိ တပ်မတော်ဘက်မှ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘဲ သတင်း ထုတ်ပြန်မှု တချို့တွင်လည်း နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာ မှုများ ရှိသည့်အတွက် သတင်းသမားများအနေဖြင့် ရသည့်ဘက်မှ ရေးသားရခြင်းမျိုးသာ ဖြစ် သည်ဟု 7Day News ဂျာနယ် တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ ကိုအားမာန်က ပြောသည်။
at 1/31/2013 11:33:00 AM No comments:
သေဆုံးသွားသည့် ကလေးမိခင် မလဘမ်လုသည် အသက် ၂၇ နှစ်ဝန်း ကျင်ရှိကြောင်း၊ ဒဏ်ရာရသူ ၃ ဦးတွင် မလဘမ်လု၏ လသားအရွယ် ကလေးငယ်နှင့် ခင်ပွန်း အပြင် ၎င်း၏ ယောက္ခမ အသက် ၉၅ နှစ်အရွယ် အဘိုးအိုလည်း ပါဝင်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့ကို ယခုအခါ မြစ်ကြီးနားဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ထားကြောင်း သိရသည်။
at 1/30/2013 06:09:00 PM No comments:
မရမ်းကျေးရွာတွင် သေနတ်ကြီးကျည်ဆံကျကာ ပြည်သူ ၂ ဦးသေဆုံးပြီး ၃ ဦး ဒဏ်ရာရ
မြစ်ကြီးနားမှ ၂၄ မိုင်အကွာရှိ မရမ့်ကျေးရွာ ရပ်ကွက် (၆) ရှိ နေအိမ် အတွင်း သို့ မနေ့ည ဇန်န၀ါရီ ၂၉ ည ၇ နာရီ မိနစ် ၃၀ ခန့်တွင် သေနတ် ကြီးကျည်ဆံ ကျရောက်ကာ အပြစ်မဲ့ပြည်သူ ၂ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ၃ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ ပစ်ခတ်မှုသည် မည်သည့် အစိုးရ အဖွဲ့မှ ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းမသိရသေး သော် လည်း မြန်မာ အစိုးရမှ ပစ်ခတ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဒေသခံများက ဆိုသည်။ အခင်ဖြစ်ပွားရာ အိမ်နှင့် မြန်မာ အစိုးရ အမြောက်တပ် အမတ (၃၇၂) နှင့် အနီးတွင်ရှိပြီး ထိုတပ်မှ ပစ် ခတ် လိုက်တာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်းသိရသည်။ အခင်းဖြစ်ပွားရာ အိမ်မှ ၃ အိမ်ကျော် အထိ ကျည်ဆံများ ထိမှန်ခဲ့သော် လည်း ဒဏ်ရာရရှိသူများမှာ အိမ် တစ်အိမ်ထဲမှ မိသားစုများသာ ဖြစ်သည်။ မရမ့်ကျေးရွာတွင် အမတ (၃၇၂) မှ မကြာခဏ အမြောက်များ ဖြင့် ပစ်ခတ်လျှက်ရှိပြီး ကျေးရွာဒေ သ ခံများ ကြောက်ကာ ဗုံးခိုကျင်းများ တူးထားကာ သေနတ်သံကြားတိုင်း ထို ဗုံးခိုကျင်းသို့ ခိုလုံလျှက်ရှိကြောင်းသိရသည်။မနေ့ညက ည ၇ နာရီမှ ၉ နာရီအထိ သေနတ်သံများ ကြားနေ ဆဲ ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
at 1/30/2013 06:01:00 PM No comments:
KIA ရဲ့စခန်းဖြစ်တဲ့ Hka Ya Bum တိုက်ပွဲ ရလဒ်နှင့် စစ်မြေပြင် နောက်ဆုံး အခြေအနေ သတင်းကို KIA နှင့် နီးစပ်သူများ ထံမှ စည်းလုံးခြင်းရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သို့ သတင်း ပေးပို့လာပါတယ်။ အဆိုပါ စခန်းကို တပ်မတော်မှ ခြေကုပ်ယူထားသော Bum Re Bum၊ M Tnt Bum ၊ Htun Tyel Bum နဲ့ Wai Maw Bum စတဲ့ နေရာ လေးနေရာ စလုံးမှ အမြောက်ကြီးများနှင့် ပိုက်စိပ်တိုက် ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း၊ တစ်ရက်ထဲမှာပင် အကြိမ်ပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်ရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ အမြောက်များ ပစ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်
at 1/30/2013 11:11:00 AM No comments:
ကချင်စစ်ပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီး အစိုးရဘက်ကပို၍တာဝန်ရှိဟု ဒေါက်တာမင်းစိုးလင်းပြော
မင်းလုံး၊ အေမီ – ကချင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားနေသော တိုက်ပွဲများနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာအစိုးရနှင့် ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO နှစ်ဘက်လုံးတွင် တာဝန်ရှိသော်လည်း နိုင်ငံတော်အစိုးရဘက်က ပို၍ တာဝန်ရှိသည်ဟု မွန်ဒီမိုကရေစီပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာမင်းစိုးလင်းက ပြောသည်။
၎င်းက “ကချင်စစ်ပွဲပြဿနာဟာ နေ့ချင်းညချင်း နာရီပိုင်းတွေမှာ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပြောင်းလဲနေတယ်၊ ဒီလ ၁၈ ရက်နေ့ကနေစပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးက တစ်ဖက်သတ် အပစ်အခတ်ရပ်စဲတယ်ဆိုပေမယ့် တကယ် တမ်းကျတော့ ဖြစ်မလာဘူး၊ တိုက်ပဲဆက်တိုက်နေတယ် ပိုတောင်ဆိုးလာသေးတယ်၊ တောင်ကုန်းတွေကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု သိမ်းယူနေတယ်၊ နိုင်ငံကိုအုပ်ချူပ်တဲ့ အစိုးရဟာ အင်အားကြီးမား သကဲ့သို့ သဘော ထားလည်းကြီးရမယ်” ဟု ပြောသည်။
at 1/30/2013 10:58:00 AM No comments:
at 1/30/2013 10:57:00 AM No comments:
at 1/30/2013 10:54:00 AM No comments:
ကချင်ပြည်နယ်မှာ တစ်နှစ်ခွဲကျော်ကြာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အစိုးရနဲ့ ကေအိုင် အေ တပ်တွေအကြား ထိုးစစ်တွေရပ်စဲဖို့နဲ့ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆက် လက် တည်ဆောက်သွားဖို့အတွက် အထူးလိုလားကြောင်း ကာကွယ် ရေးဝန်ကြီးဌာနက ဒီကနေ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
ဒါဟာ ကချင်ပဋိပက္ခနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ပထမ ဦးဆုံးအကြိမ် ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။
အဲဒီ့သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ကို အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်လို့ ကြိုဆို တယ်လို့ ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၆) တပ်ရင်းမှူး ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး အင်ခွန်ဇော်ဒွဲ က RFA က တဆင့် အခုလို တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။
at 1/30/2013 10:43:00 AM No comments:
ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO) ထိန်းချုပ်နယ်မြေ မိုင်ဂျာယန် (Mai Ja Yang) ရှိ ပါကထောင် (Pa Kahtawng) ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ၅ နှစ် အောက် ကလေး ၅၀ ကျော်တွင် ဝမ်းပျက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေကြောင်း မိုင်ဂျာယန် (Mai Ja Yang) ကျန်းမာရေးဌာနမှ သိရသည်။
ကလေးငယ်များ ၀မ်းလျှောဝမ်းပျက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုသည် ယခုလ ဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းမှ ပိုများလာခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုချိန် နေ့စဉ် ဆေးခန်းသို့ ၄ ယောက်မှ ၁၀ ယောက်ဝန်းကျင် လာရောက်ဆေးကုသမှု ခံယူနေ ကြောင်း ပါကထောင် (Pa Kahtawng) ကျန်းမာရေးဌာနမှ ဆရာမ ဘောက်တောင် KNG ကချင်သတင်းဌာန သို့ပြောသည်။
at 1/30/2013 10:42:00 AM No comments:
at 1/29/2013 09:12:00 PM No comments:
at 1/29/2013 08:58:00 PM No comments:
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO နဲ့ အစိုးရအကြား ဖြစ်ပွားနေတဲ့ စစ်ပွဲတွေ ရပ်ဆိုင်းသွားစေဖို့အတွက် နှစ်ဘက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကို ၀ နယ်မြေတွင်းမှာ ပြုလုပ်ဖို့ ၀ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော် UWSA က ဖိတ်ခေါ်ထားတာကို KIO ဘက်က လက်ခံလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရဘက်ကလည်း အရင်ရက်တွေကတည်းက လက်ခံထားပြီးဖြစ်တာကြောင့် ပထမ မကြာမှီ ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာ KIO နဲ့ အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တို့ဟာ ၀ ဒေသရဲ့ မြို့တော် ပန်ဆန်းမှာ တွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပါတယ်။ ဒီအကြောင်းသတင်းအပြည့်အစုံကို ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ် သတင်းထောက် ကိုမိုးဇော် က တင်ပြထားပါတယ်။
KIO နဲ့ အစိုးရတပ်တွေအကြားမှာ စစ်ပွဲတွေ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေသလို ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် နှစ်ဘက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေ ရပ်တန့် နေချိန်မှာ တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်မှာ အခြေစိုက်တဲ့ UWSA ၀ပြည်သွေးစည်း ညီညွတ်ရေးတပ်မတော်က ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေက ဖိတ်ကြားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
at 1/29/2013 08:57:00 PM No comments:
အစိုးရတပ်မှ လိုင်ဇာ (Laiza) ဌာနချုပ်နယ်မြေရှိ KIO ၏အရေးကြီးသော တပ်စခန်းများအားလုံးကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် ဆက်လက်၍ လိုင်ဇာတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာလျင် ဒုက္ခသည်လူထုများ ဆက်လက်၍ လုံခြုံရာသို့ခိုလှုံနိုင်ရန် စီစဉ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း လိုင်ဇာ (Laiza) အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဒူကဘာ ကရဲန်နော်အောန် (Dukaba Kareng Naw Awn) KNG ကချင်သတင်းဌာနသို့ပြောသည်။
at 1/29/2013 08:54:00 PM No comments:
ရန်ကုန်မှ ကချင်ပြည်နယ် လိုင်ဇာမြို့အထိ ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းလျှောက် သည့် အဖွဲ့သည် ယနေ့ နေ့လယ် ၂ နာရီတွင် တောင်ငူမြို့ သို့ ရောက်ရှိပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ အဖွဲ့ကို တောင်ငူမြို့ပေါ်ရှိ အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးမည်ဟု အသံများ ထွက်ပေါ်နေသော်လည်း လက်ရှိအချိန်အထိ တားမြစ် ဖမ်းဆီး ခြင်းများ မရှိသေးကြောင်း ယင်းအဖွဲ့တွင် ပါဝင်လမ်းလျှောက်သည့် ဆရာတော် ဦးရက္ခဝံသက ဆိုသည်။
ရွှေဟင်္သာသတင်းဌာန ဇန်န၀ါရီလ (၂၈) ၂၀၁၃
ကချင်ပြည်တွင်းစစ်နှင့် ပတ်သက်၍ လန်ဒန်တက္ကသိုလ်၊ အရှေ့တိုင်းနှင့် အာဖရိကရေးရာ လေ့လာရေးဌာနမှ သုသေသန အရာရှိ ဂိုင်းဟော်တန် နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
မေး - လိုင်ဇာနားက နောက်ဆုံး ခံတပ်ကုန်းတွေထဲက တစ်ခုကို လက် လွှတ် လိုက်ရတယ်လို့ သိရတယ်။ မြန်မာ စစ်တပ်အတွက် ကေအိုင်အို ဌာနချုပ်ဆီကို လမ်းပွင့်သွားသလို ဖြစ်သွားတာပေါ့။ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ် လာနိုင်သလဲ။
ဖြေ - ဖြစ်နိုင်ခြေ နှစ်ခုရှိတယ်။ တစ်ခုက ကေအိုင်အေဌာနချုပ် လိုင်ဇာကို အလုံးအရင်းနဲ့ ၀င်တိုက်နိုင်တယ်။ တကယ်လို့ ၀င်တိုက်ခဲ့ရင် လိုင်ဇာ မြို့နေ လူထုကလည်း ပြန်ခုခံကြလိမ့်မယ်။ ကျနော် တကယ်စိုးရိမ်တာက သွေးချောင်းစီး သတ်ဖြတ်မှုကြီး ဖြစ်လာမှာကိုပဲ။ လက်ရှိ တိုက်ခိုက်မှု တွေဟာ မြန်မာပြည်မှာ ကျနော်ကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ တော်တော် ကို ခြားနားပါတယ်။ ခြုံခို တိုက်ခိုက်မှု သက်သက် မဟုတ်သလို၊ ရွှေဝါ ရောင်တော်လှန်ရေးလိုလည်း မဟုတ်ဘူး၊ ၈၈ အရေးအခင်းနဲ့လည်း မတူဘူး။ ဒါဟာ အပြင်းထန်ဆုံး စစ်ဆင်ရေးပါ။ ပြည်သူတွေ နားလည် နိုင်ဖို့တော့ ခက်ပါတယ်။ ခံတပ် အခိုင်အမာတွေနဲ့ တိုက်ကြတဲ့ စစ်ပွဲဗျ။
at 1/29/2013 07:36:00 PM No comments:
ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KIA) နှင့် မြန်မာ့တပ်မတော် အကြား ဖြစ်ပွားနေသော စစ်ပွဲများ အမြန်ဆုံး ပြေငြိမ်းရေး၊ ဒေသတွင်း လုံခြုံမှု ရရှိရေးနှင့် ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေး တို့အတွက် မြန်မာအစိုးရ တပ်မတော်နှင့် KIA တို့ကို ပူတာအိုဒေသခံများက တောင်းဆို ဆန္ဒထုတ် ဖော်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“KIA အနေနဲ့ လမ်းတံတားဖျက်တာတွေ၊ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ထပ်မလုပ်ဖို့ လည်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြတယ်လို့ ပြောတယ်။ ကျနော်လည်း မြစ်ကြီးနား ရောက်နေလို့ အတိအကျတော့ မသိသေးဘူး” ဟု ကချင်ပြည်နယ် ပူတာအို မြို့နယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးလီပေါ်ရဲက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ပူတာအို ဒေသခံ အင်အား ၃၀၀ နီးပါးခန့်သည် ယနေ့ နံနက် ၈ နာရီခန့်မှ စတင်ပြီး ဟိုခိုရပ်ကွက်မှ ပူတာအို မြို့မဈေး အနီးအထိ ချီတက်ကာ ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
at 1/29/2013 06:51:00 PM No comments:
at 1/29/2013 06:47:00 PM No comments:
တိုင်းရင်းသား တွေက တလှည့်စီ ရိုက်သတ်စားနေတာ ကို သိလျှက်နဲ့ ကိုယ့်အလှည့် မရောက်ခင် ကြောင် ကြည့်နေတတ် တဲ့ နွားတွေလိုပဲ ဖြစ်နေတယ်။ ၁၉၉၄ မှာ ကရင် ကို သတ်တုန်းကလဲ ကေအိုင်အို ခေါင်းဆောင်တွေ ဆင်ခြေအမျိုးမျိုးပေးပြီး မသိဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်။ သို့သော်လည်း၊ စုပေါင်း တပ်မှာ တော့ ကေအိုင်အေ တွေ ပါခဲ့ပါသေးတယ်။ ကိုးကန့် ကို တိုက်တော့လဲ အားလုံး ကြောင်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ အခု ကေအိုင်အေ အလှည့်။ နောက် ဘယ်သူ့အလှည့် လာအုံးမလဲ?????
at 1/29/2013 09:52:00 AM 1 comment:
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ တပ်မဟာ (၅) လက်အောက် တပ် ရင်း (၁၈) နယ်မြေဖြစ်သော မြစ်ကြီးနား - လိုင်ဇာလမ်း လဂျားယန် အနီး ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သွားလာလှုပ်ရှားနေသော ဗမာစစ်တပ်နှင့် ကေအိုင် အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များ ဇန်န၀ါရီ (၂၈) ရက်နေ့ မနက် (၈း၄၀) နာရီခန့် အချိန်တွင် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ တိုက်ပွဲ သတင်း အသေးစိတ်ကို ဆက်လက် စုံစမ်းလျက် ရှိပါသည်။
at 1/29/2013 08:38:00 AM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ အရှေ့ပိုင်းတိုင်း တပ်မဟာ (၃) လက် အောက် တပ်ရင်း (၂၁) ဒေသ ဖြစ်သော ခရိန်မူဒန်ကျေးရွာ တွင် ရောက် ရှိနေသော ဗမာအစိုးရစစ်တပ် များသည် ဇန်န၀ါရီလ (၂၇) ရက် ညနေ (၅း၄၅) နာရီခန့်တွင် အချင်းချင်းမှားယွင်း ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဤသို့ ဗမာစစ်တပ် အချင်းချင်း မှားယွင်းပစ်ခတ် နေချိန်တွင် စိန်လုံ ကောင်းလောဒ့်တွင် နေရာယူထားသော ဗမာစစ်တပ်မှ အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာသို့ လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်ပေးခဲ့ကြောင်း လည်း သတင်းကြားသိရပါသည်။